ယေဘူယျအားဖြင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (၂၀၁၀) - serotonin တွင်ပြင်းထန်သော tryptophan ပြတ်တောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - Brain On Your Brain
generalized စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ (2010) နဲ့ serotonin reuptake inhibitor-လွတ်လူနာစူးရှ tryptophan ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏ဆိုးကျိုးများ
Psychopharmacology (Berl) ။ 2010 Feb;208(2):223-32. doi: 10.1007/s00213-009-1722-1.
hood ကို SD က, Hince DA, ဒေးဗီးစ် SJ, Argyropoulos S က, ရော်ဘင်ဆင် H ကို, Potokar J ကို, Nutt DJ သမား.
Serotonergic စိတ်မကျဆေး Antidepressants [ရွေးချယ် serotonin reuptake inhibitor (SSRI)] ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ (ထွေအုပ်) အတွက်ပထမဦးဆုံး-line ကိုကုသပါ၏ Synaptic serotonin (5-HT) ရရှိနိုင်မှုလျှင်သို့သော်သူကမသိရ SSRI ထိရောက်မှုဘို့အရေးကြီးပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုစူးရှ tryptophan တွေပျက်စီးမှု (ATD) မှတဆင့်ဗဟို 5-HT ဂီယာအတွက်ယာယီလျှော့ချရေး, ထွေအုပ်လူနာအတွက် SSRIs ၏ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု reverse မယ်လို့သောအယူအဆစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
SSRI ကုသမှုနှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့လက်တွေ့တိုးတက်မှုပြသသူကိုထွေအုပ်တွေနဲ့တကျိပ်နှစ်ပါးသောလူနာ (ခြောက်လအထီး), ဆိတ်ကွယ်ရာ2အပတ်က 1 ရက်ပေါင်းကျော်တစ်ဦးကို double-မျက်စိကန်း, ရလဒ်များအရအိပ်ယာ-controlled, အတွင်း-ဘာသာရပ်များဒီဇိုင်း ATD ခံယူ။ ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏အထွတ်အထိပ်ထိုအချိန်တွင်သင်တန်းသားများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုမိမှာအနည်းဆုံး 7.5 များအတွက်ကျပန်းနိုင်ရန်အတွက် 2% CO12 နှင့်လေကြောင်းရှိုက်။ နှင့် Mood ပွညျထောငျစု၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile; စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုဟာ Spielberg ပြည်နယ်တော့ပူပန် Inventory (Stay-S က) နှင့်ထွေအုပ်-လက္ခဏာအမြင်အာရုံ analogue အကြေးများ (ဥပမာ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်တင်းမာနေ VASs) ကို အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့ကြသည်။
အခမဲ့ပလာစမာ tryptophan နှင့်ကြီးမားသောကြားနေအမိုင်နိုအက်စစ် (LNAA) အချိုးသည်လျော့နည်းသွားသည့်နေ့တွင် ၉၂% လျော့နည်းသွားပြီးထိန်းချုပ်သည့်နေ့၌ ၂% လျော့နည်းသွားသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ depletion အခြေအနေမည်သို့ပင်ဆိုစေ ၇.၅% CO (92) ရှူရှိုက်မိပါက STAI-S နှင့် GAD နှင့်သက်ဆိုင်သော VAS ရမှတ်များ (p <2) သည်လေကိုရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုမိုမြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အခမဲ့ tryptophan / LNAA အချိုးအစားသိသိသာသာလျှော့ချပေမယ့် ATD သည်ဤအစီအမံမဆိုသက်ရောက်မှုမရှိပါ။
SSRIs ထိရောက်စွာထွေအုပ်ပြုမူဆက်ဆံသော်လည်း, ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုလုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားထိတ်လန့်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုမမှန်တွင်တွေ့မြင်ကြောင်းမှကွဲပြားခြားနားသောကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထွေအုပ်၏အောင်မြင်သော SSRI ကုသမှု serotonin ၏မြစ်အောက်ပိုင်းသည်အခြား neurotransmitter စနစ်များအတွက်ရေရှည်အဲဒီ receptor ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ပွောငျးလဲပါဝင်လိမ့်မည်။